U habee awoodda buuxda ee ereyga 2016 CV-gaaga iyo warqadda daboolka ah! Aqoon isweydaarsigan uu sameeyay Jean-Luc Delon, la wareego qalabka softiweerka si toos ah aad uga shaqeyso waxyaabaha aad ka kooban tahay. Baro farsamooyinka qaabeynta oo baro sida loo qaabeeyo, loo maareeyo loona abaabulo dukumiintiyadaada si dhakhso leh. Sidoo kale soo hel dariiqad guud oo loo dhigo nooc kasta oo dukumiinti gaagaaban ah oo ku jira Ereyga 2016. Dhamaadka tababarkan, waxaad ogaan doontaa sida loo sameeyo aragti wanaagsan, waxaad abuuri doontaa CV tayo leh oo aad ka dhigi doontaa waraaqahaaga daboolka kuwo aad u soo jiidasho badan!
Abuur CV iyo warqad dabool leh ereyga 2016 Diisambar 12, 2020Tranquillus
READ Ururinta Jirka: 3- Mowjadaha Makaanikada
horeQor emayl xirfadle ah
socdaWada shaqeyn koox ahaan la leh Microsoft Office 365 Suite
Ku bilow wax soo saarka dhijitaalka ah